युगसम्बाद साप्ताहिक - राष्ट्रिय दिवस नै नभएको लाजमर्दो स्थिति : किरण बुर्लाकोटी
Monday, 04.06.2020, 02:51pm (GMT+5.5) Home Contact
राष्ट्रिय दिवस नै नभएको लाजमर्दो स्थिति : किरण बुर्लाकोटी
Monday, 01.16.2012, 04:37pm (GMT+5.5)
जनआन्दोलन–२ पछि मुलुकले कुनै राष्ट्रिय दिवस पाएको छैन । त्यसअघि हरेक वर्षको पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइन्थ्यो । लोकतान्त्रिक भनिने सरकार गठन भएपछि त्यसलाई हटाइयो । अहिले राष्ट्रिय दिवस पुस २७ लाई मान्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका छन् । राष्ट्र एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको २९० औं जयन्तीका अवसरमा नागरिक स्तरबाट आयोजित कार्यक्रममा धेरैले सो दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउने माग गरे ।
मुलुक अत्यन्त सम्वेदशील परिस्थितिमा छ । गलत राजनीतिक मुद्दाहरूका कारण एकपछि अर्को समस्याहरू निम्तिरहेका छन् । त्यसकारण चारैतिरबाट राष्ट्रिय एकता कायम हुनुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन् । राष्ट्रिय एकता अत्यन्त कमजोर भएको अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक नाराले मात्र मुलुक सुरक्षित हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । देशको राजनीतिक परिस्थिति जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा आ–आफ्नै स्वार्थले बढी काम गरेको छ । शीर्ष दलहरू आपसी सहमति कायम गरेर मुलुकको सार्वभौमसत्ता जोगाउने पक्षमा कहिल्यै एक हुन सकेनन् । राष्ट्रियताको सवालमा नेपालका राजनीतिक दलहरू अत्यन्त कमजोर सावित भैरहेका छन् । सत्ता र शक्ति हत्याउने एउटा औजारका रुपमा राष्ट्रियताको विषयलाई उठाउने गरिएको छ । हिजो जस्तो परिस्थिति थियो आज पनि त्यस्तै छ । राष्ट्रियता झन्झन् कमजोर बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय एकताका आधारहरू दिन प्रतिदिन कमजोर मात्र भैरहेका छैनन् यसलाई भताभुङ्ग पारेर विदेशी पोस्ने काम समेत भैरहेको आरोप छ ।
राष्ट्रियताको विषय दलअनुसारको फरक र राजनीतिक स्वार्थसंग जोड्ने गरिएको हुँदा नेपाल राष्ट्रियता बचाउने आन्दोलनले मूर्तरुप लिनै पाएको छैन । अहिले राष्ट्रिय एकता खलबलिएको अवस्था छ । यसलाई एउटै मालामा उनेर एकतावद्ध गर्नु अबको चुनौती कम छैन । यो विषयलाई जसरी राजनीतिक स्वार्थमा घोलियो त्यसले मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्ने खतराहरू कायमै छन् । सवैलाई आ–आफ्नै अधिकार चाहिएको छ । समग्र मुलुकको अस्तित्वसंग कसैले पनि आफूलाई जोड्न चाहेका छैनन् । भाषा, संस्कृति, भेष भुषा जेजस्तो भए पनि हामी नेपाली हौं भन्ने भावनाको विकास हुन सकेको छैन । पहिला नेपाली हुने कि मधेसी वा तराईबारी हुने ? नेपाली भएर मात्र हिन्दु, मुसलमान, इसाई, ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित, जनजाति, मधेसी, सवै रहने हो । नेपालै नरहे त्यो अस्तित्व कहाँ गएर खोज्ने ? अभियानकारी र जातीय आन्दोलन उठाइरहेकाहरूले हेक्का राख्नुपर्ने विषय यही हो । मुलुकभित्र हरेक जातजातिबीच रहेको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कटुतामा परिणत भैरहेको बेला विदेशीले चलखेल गरिरहेका छन् । सीमा मिच्ने क्रम रोकिएको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेपको त कुरै नगरौं । सत्तामा बस्दा विदेशी हस्तक्षेपलाई ‘सहयोग’ ठान्नेहरू विपक्षमा बस्दा त्यसलाई हस्तक्षेप नै हो भन्ने गर्दछन् । सत्तामा रहँदा र नरहँदा राष्ट्रियताको विषय नै फरक हुने गरेको छ । राष्ट्रियतालाई अपमान र गालीको विषय समेत बनाउने गरिएको छ । विगतलाई सरापेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य सुनिश्चित गर्ने गलत महत्वकांक्षा राख्नेहरू ‘महेन्द्र राष्ट्रवाद’, ‘मण्डले राष्ट्रवाद’, ‘अन्धो राष्ट्रवाद’ भन्दै राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्नेहरूलाई दुत्कार्ने गरिएको छ । अरु त अरु बुद्धिजीवीहरू समेत यो होडमा लागेका छन् ।
सत्ताको सेरोफेरोमा बस्नेहरू कहिल्यै राष्ट्र खतरामा परेको देख्दैनन् । सत्तामा आँच आउने सम्भावना देखे राष्ट्रियताको दुहाई दिन्छन् । विदेशीकै इशारामा राष्ट्रिय एकतालाई भत्काउने काम भएकोमा कुनै शंका छैन । धर्म निरपेक्षको घोषणा यसैको कडी हो भने जातीय राजनीतिलाई महत्व दिएर क्षणिक शक्ति आर्जन गर्ने सुझाव पनि अरुकै हो । टुक्रा टुक्रामा विभाजित नेपाललाई एकताको सूत्रमा उन्ने पृथ्वीनारायण शाहको शालिक तोड्नेदेखि लिएर उहाँको जन्मदिनमा मनाइने राष्ट्रिय एकताा दिवस खारेज गर्नु पनि विदेशीकै निर्देशन पालना हो । नेपाललाई साझा फूलबारीको रुपमा स्वीकार गरेर सवैको आ–आफ्नै अस्तित्व कायम गरिएको विगतको महत्वपूर्ण पाटोलाई लत्याएर ‘निरंकुशता र सामन्तवादको अवशेष’को रुपमा चित्रण गर्नुको परिणाम पनि अहिले देखापरिरहेको छ । मुलुकमा अहिले राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ । तर त्यो एकता कसरी कायम गर्ने ? यस विषयमा कसैले केही सोचेका छैनन् । विगतमा राजसंस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानिएको थियो तर अहिले के हो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक ? राष्ट्रपति डा. रामवरण, प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई ? के राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने कुनै प्रतीक चाहिंदैन । राष्ट्रलाई एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको अवमूल्यन गर्दै अन्धो क्रान्तिकारी बन्ने होडवाजीले मुलुकलाई अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पु¥यायो । तैपनि चेतना जागेको छैन ।